हृदयरोगी कोलेस्ट्रोल र बुढ्यौली भगाऊँनका लागि यस्ता छन् पाकेको फर्सी खानुका फाइदा « गोर्खाली खबर डटकम
हृदयरोगी कोलेस्ट्रोल र बुढ्यौली भगाऊँनका लागि यस्ता छन् पाकेको फर्सी खानुका फाइदा
एजेन्सी । फर्सी तरकारीको एक प्रकार जुन लहरामा फल्छ। प्रायः सबै ठाउँमा उत्पादन हुन्छ। फर्सीको लहराको मुन्टा, पात, फूल र फल सबै उपयोगी हुन्छ ।फर्सीमा भिटामिन ‘ए’ प्रशस्त पाइन्छ । आवश्यक पोषकतत्व फर्सीमा पाइन्छन् ।कमलपित्त, क्षयरोग, बढी तिर्खा लाग्ने, कलेजोमा खटिरा जास्ता रोगलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउछकब्जियत भएमा तथा टाउको दुखेमा पनि फाइदा गर्छ ।
पायल्स र शरीरभित्र जलन हुँदा पनि फलदायी हुन्छ ।गाईवस्तुमा थुनेलो रोग लागेमा पाकेको फर्सीको भेट्नु पानीमा घोटेर लगाउँदा ठिक हुन्छ । यसको लेपले विषालु किराको विष पनि हट्छ ।फर्सीको बियााले शरीरमा भएको पत्थरी निकाल्छ ।फर्सीको बियाँ छोडाई यसलाई पिँधेर ओठमा लगाउँदा ओठ फुटेको, चिरिएको तथा सुख्खापन भएको निको हुन्छ ।निन्द्रा नलाग्ने रोगमा पनि यसले फाइदा गर्छ ।रुखो कपाललाई नरम बनाउँछ ।फर्सीका १०–१५ बियाँ नियमित खाँदा छाती पोलेको ठीक हुन्छ ।
नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपा’च्य र स्व’स्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भ’ण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वा’स्थ्यका लागि कम्ता पो’षिलो छैन ।
तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मःम बनाएर खाए हुन्छ । आफुसँग पाककला भए, अनेकथरी परिकार बनाउन सकिन्छ ।स्कुस निकै गुणी तरकारी हो । मानव स्वा’स्थ्यको लागि स्कुस एउटा बहुउपयोगी खानेकुरा हो । स्कुस लौका प्रजातिको एक प्रकारको तरकारी हो ।
यसको उ’ब्जनीको व्याख्या गर्ने हो भने यो विशेषतः मेक्सिको र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट उत्पत्ति भएको तरकारी हो । यसको उत्पादन अहिले त विश्वभरि नै फैलिएको छ । ए’न्टिअ’क्सिडेन्ट र विभिन्न पो’षक तत्वहरूसहितको यो तरकारी स्वा’स्थ्यको लागि अत्यधिक ला’भ प्रदान गर्ने तरकारी हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
स्कुसका तल उल्लेखित फाइदाहरू छन् । १. पो’षक तत्वको धनी स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो तरकारी पोषक तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भि’टामिन, ख’निज, र फा’इबरहरू पाउन सकिन्छ ।
जुन हाम्रो शरी’रको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रा’मको स्कुसमा निम्नलिखित पोषकतत्व पाइन्छ । क्यालोरी – ३९ कार्बाे’हाइड्रेड – ९ ग्रा’म प्रो’टिन – २ ग्राम भि’टामिन सी –२६ प्रतिशत क’पर – १२ प्रतिशत पोटा’सियम – ७ प्रतिशत म्याग्ने’सियम – ५ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ ।
यस्तो खाले पोषक तत्वका साथसाथै स्कुसमा कम क्या’लोरी, फ्याट, सोडि’यम र का’र्बाेहाइड्रेड हुने गर्छ । त्यस्तै, श’रीरलाई स्व’स्थ बनाउनको लागि यो सहायक सिद्ध हुन्छ ।२. एन्टिअ’क्सिडन्टको उपलब्धता स्कुसका धेरै फाइदाहरू छन् । यसलाई श’रीरमा चाहिने एन्टिअ’क्सिडेन्टको प्रचु’रताका कारण पनि अति’गुनिलो तरकारीको रूपमा मान्ने गरिन्छ ।
एन्टिअ’क्सिडेन्ट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदा’र्थहरूमा पाइन्छ, जसले हाम्रो श’रीरको तन्तुहरूमा हुने अस’रबाट बचाउँछ भने यसले श’रीरभित्र हुन सक्ने तना’वलाई पनि कम गर्ने गर्छ ।यिनीहरूमध्ये स्कुसमा माइ’रिसेटिन सबैभन्दा अधिक मात्रामा पाइन्छ ।
विभिन्न अनुसन्धान अनुसार मा’इरिसेटिन क्या’न्सरप्रति’रोधी छ साथै यसले म’धुमेह र ज’लन पनि कम गर्छ । स्कु’स भि’टामिन सीको एउटा उत्कृष्ट स्रोत हो, जुन हाम्रो शरी’रको लागि अत्यावश्यक हुन्छ । ३. मु’टुको स्वा’स्थ्यका लागि स्कुस धेरै खाने मान्छेमा मु’टुरो’गको जो’खिम कम हुने गर्छ । जस्तै, उच्च र’क्तचाप, उच्च को’लेस्ट्रोल र र’क्तप्रवाहमा पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ । ज’नावर र टेस्ट’ट्युबमा गरिएको अनुसन्धानले र’क्तनलीहरूलाई स्व’स्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ । यसले र’क्त प्रवाहमा सुधार ल्याउने एवं र’क्तचाप घ’टाउन मद्धत गर्छ ।
अग्लो हिल लगाउँदा नङ जोगाउन सकस !
चिकित्सक संघले देशभर ‘रेड अलर्ट’ घोषणा गर्‍यो, सबै एक जुट हुन अपिल
भारतमा कोभिड बिरामीका आँखा बिगार्ने घातक ‘कालो ढुसी’